CHEMBERE yekuNyanga inoti yakonzera kufa kwevanhu vanodarika 10 vemumhuri vanosanganisira vana vayo nevekumhuri kwayakaroorwa mukati memakore gumi adarika.
Nguva pfupi yadarika, chembere iyi yakakwira muchimwe chikomo cheko umo yakanorasa “zvinhu” zvainonzi inoshandisa mukuroya.
Mbuya Celepra Nyakwangwa vekwaMambo Saunyama vakaperekedzwa kuchikomo ichi neimwe n’anga yekuNyanga, Sekuru Shingirai Mukotsanjera, mwanakomana wavo Johannes Saunyama pamwechete nevemumhuri yekwaNyakwangwa apo paiitwa basa rekuvachenura.
Mbuya Nyakwangwa, avo vasisakwanise kumira voga nekuda kwekuchembera, vanoti vari kuuraya vana vavo nevamwe vemumhuri iyi senzira yekutsiva mombe dzavo dzakatorwa nevana vavo makore makumi mashanu adarika. Johannes anoti basa rekuchenura amai vake iri harina kumbotora maminitsi anodarika mashanu kuti ripere.
Anoti kuchikomo uku, amai vake vakafukunura pasi, ndokuburitsa nyanga muvhu nechimwe chinhu chairatidzika sesikarudzi yemunhurume.
Zvinhu izvi zvakazotorwa zvikanopiswa panzvimbo iri kunze kwepanotongerwa matare naMambo Saunyama, VaVictor Saunyama, kwava kumanheru.
“Semwanakomana wavo ndoga, ndasunungurwa kuti pekupedzisira vazozvipira kuburitsa pachena zvinhu zvavanoshandisa mumabasa ehuroyi. Zvinorwadza kurasikirwa nevadikani munguva pfupi yakadaro. “Tinovimba kuti mhepo iyi yadarika. Mbuya vakatitaurira kuti kana tichinge tangopisa zvinhu izvi bedzi, tinenge tachengetedzeka. VanaTsikamutanda vakawanda vakauya pano vakatadza kugadzirisa dambudziko redu,” anodaro Johannes.
Mambo Saunyama vanotsinhira nyaya iyi vachiti uku kunogona kunge kuri kupera kwedambudziko gukutu range rakatarisana nemhuri yekwaNyakwangwa.
“Mhuri yekwaNyakwangwa yange yatambudzika zvikuru. Zvisinei, mbuya ava vakazozvipira kuburitsa zvinhu zvavo zvavaishandisa mumabasa ekuroya vachiri vapenyu saizvozvi,” vanodaro.
Asi, Mbuya Nyakwangwa vanoti vachiri kuda mombe dzavo dzakatorwa nevana vavo uye mhuri yekwaNyakwangwa inovimbisa kuvaripa nemombe ina munguva pfupi iri kutevera.
Mbuya ava vanopika kuti vacharamba vachikonzera matambudziko neminyama kumhuri yekwaNyakwangwa kana vasina kuripwa mombe dzavo.
Pasi pemitemo yenyika ino, hazvikurudzirwe kupumha munhu huroyi kunze kwekunge ari kunanga mumwe aine humboo nehuchapupu hwakazara.
Vakwegura vanowanzopumhwa huroyi vanhu vachitora mukana wekukura kwevo pamwe chete nehanganwa uye kuti vanenge vachimborasika zvimwe zvinhu pakutaura.